नेपालको पानीमा छिमेकीको गिद्धे दृष्टि – Chitwan Post
नेपालको पानीमा छिमेकीको गिद्धे दृष्टि
हे भगवान् ! म भगवान् मान्दिनँ, भगवान् छ जस्तो मलाई किञ्चित पनि अनुमान आउँदैन । तर, मैले हरफको पहिलो शब्द नै भगवान्बाट सुरू गरेँ । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले किन, कसरी हो कुन्नि जीवनको अन्तिम क्षणमा ‘आखिर कृष्ण रहेछ एक’ भनी ईश्वरको नाउँमा श्रीकृष्ण पुकारेका थिए । किनकि, देवकोटा पनि ईश्वर वा भगवान्प्रति आस्था र विश्वास नराख्ने व्यक्ति नै थिए । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा क्यान्सरको पीडाबाट पीडित थिए । त्यसबखत क्यान्सरको पीडाबाट पीडितलाई राम्रो उपचार विधिको अभाव थियो । तर, मलाई त्यस्तै पीडा होइन कि राष्ट्रप्रतिको पीडाले म यो निरीह देशको यौटा प्राणी छट्पटिन र मुखमा आएको आवाज प्रस्फुटित गर्छु । अझै भन्छु ‘हे भगवान् ! छौ तिमी भने विवेकी बनिदेऊ । यो निरीह देश र निरपराधी मुलुकलाई स्वतन्त्र, पीडारहित बाँच्न देऊ । दुई सय वर्ष गोराको पैँताला पनि खुम्चो पारी बाँच्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भएर त्यो खुम्चिएको पैँतालाले यौटा निमुखा देशमा कसैको हरामविरामविना बाँचिरहेको मानवजातिमाथि दानवीय नाच नाच्नबाट बचाइयोस् भन्ने नै आराधना हो ।
यो देश नेपाल उदयदेखि सूर्यको अस्तसम्म एकछत्र राज गर्ने अङ्ग्रेजबाट पनि बचाएर राखेको स्वतन्त्र राज्य हो । यो राज्यमा राज्यको अपनत्व ठम्याउने मानव प्राणीको अभाव छ । यो देशमा जन्म लिएको जोकोही पनि यो देशलाई मेरो देश भनी ठान्दिने मान्छे भएको भए कोशी, गण्डकीले किन बास पाएन ? किन पराईको अधिपत्य भोग्नुपथ्र्यो ? यस्तै, पीडाको छटपटीमा लेख्ने, पीडा पोख्ने, गुहार माग्ने काम अहोरात्र गर्दै आएको म मान्छे पनि यतिबेला ‘टेक्ने हाँगा, न समाउने डाली’ भएर छटपटिँदै भगवान् पनि छ कि कतैझैँ लागेर पुकारेको हुँ ।
अङ्ग्रेजको बुटले पिल्सिएर राखिएकाहरुको अस्तित्व नदेखिँदाको अवस्थामा नै तिनै अङ्ग्रेजसँग लडाइँ गरेर बचाइएको भूमि चोखो र स्वतन्त्र भूमि अङ्ग्रेजको पाउबाट उम्किएर अङ्ग्रेजको राजमा आफ्नो राज्यको धोती पहिरिन समर्थ भएपछि अङ्ग्रेजको प्रतिशोध फेर्ने दानवधारी स्वभाव र व्यवहार पछार्न सुरू भयो, अत्यन्त कमजोर तर निर्दोष छिमेकीमाथि । हेर त भगवान् ! त्यो दानवी राक्षसको पासो १९५० को सन्धिको नामले फन्को मा¥यो । के कुनै मान्छे विनाअपराध गलामा सुर्केनोमा पर्नुपर्ने हुन्छ त ? यो देश नेपालमा त्यस्तो अपराधको जञ्जीर भिर्नुपर्ने स्थिति अनायासै जाइलाग्यो । १९५० को सन्धि नेपाल र नेपालीको गलपासो भइरहेको छ । छिमेकीको मिचाहा प्रवृत्ति र दास मनोवृत्ति भएका नेताहरुका कारण नदीनालामा नेपालको हैन भारतको भइरहेको छ । त्यसकारण क्रमैसँग छिमेकी दानव पङ्क्तिबाट यो शुद्ध र पवित्र जलस्रोतमाथि गिद्धे नजर गाड्न सुरू भयो ।
तर, यो निरीह देशमा अपनत्वको महसुस नभएकाहरुबाट लाटाले केरा हेरेजस्तै गरी हेर्दै हिमाली पानीको अर्पण सुरू गरियो । लाटाको होस् वा निरीहको होस्, मुख, पेट र आत्मा भएकै मान्छेरुपी प्राणी छिर्दै थिए । त्यतिबेलै पनि भात, दाल, तरकारी खान्थे । त्यसका लागि खेत चाहिन्थ्यो । खेतलाई पानी चाहिन्थ्यो । आफ्ना देशवासीलाई ढुंगे, माटो खाऊ भन्न मिल्दैन थियो होला । बिजुलीले मान्छेलाई पर्ने आवश्यकता पूर्ति हुने कुरा नबुझ्ने मान्छेरुपी प्राणी थिएनन् होला । त्यो बेला उत्पादन गर्न नसके कुनै दिनमा सकिने ज्ञान किन नभएको ? मैले आफ्नै देश र देशमा जन्मेका सन्तानलाई निमिट्यान्न पारेर हकै नलाग्ने गरी पराईलाई पोस्दा आआफ्ना सन्तान, दरसन्तानले युगौँयुगसम्म सराप्ने छन्, थुक्ने छन्, धारे हात लाउने छन् भन्ने कुरा पनि नसम्झने हुस्सु त थिएनन् होला । ‘तँ राष्ट्रघातीका सन्तान होस् भनेर मेरा छोरानातिको पुस्तौँसम्मलाई कलंक लाग्ने छन् भन्ने कुरा ती राष्ट्रका मेरूदण्ड दुष्टलाई चढाउनेले नबुझेका पक्कै थिएनन् होला ! जुन कुरा आज घामजस्तै छर्लंग भएको छ । किनभने, जसरी यी सम्पूर्ण राष्ट्रघातको जालमा नेपाललाई पा¥यो, नेपालको पानी, मानवजातिको ‘मूल नसा’ भएभरका नदीनाला विनासर्त र विनालाभ शत्रुलाई पोस्यो । उसले अब अर्काको सम्पत्ति, अर्काको जन्मसिद्ध हकअधिकार आफ्नै भन्न लाग्यो ।
यो राष्ट्रको अस्मिता लुटिएकोमा, जलस्रोतको बिल्ला आपूm भिर्ने तर जलस्रोतचाहिँ वैरीलाई पोको पारेर बुझाइदिने जनघाती अपराधीप्रति गम्भीरतापूर्वक लेख्ने, गुहार माग्ने, जनतालाई सम्बोधन गर्ने गर्दै आएको दशकौँ बित्यो । लुटेराले लुट्ने राष्ट्र र जनताप्रतिको राष्ट्रघातमा रमिते बन्ने यो देशका अगुवाहरु अहोरात्रको दासत्वलाई कुन आत्माले धिक्कार भन्ने कि कुन हैसियतले मान्छेमा गन्ने ? यो स्थितिमा राष्ट्रको निम्ति मरिमेट्ने, प्राणभन्दा प्यारो ठान्ने सपूत चुपचाप बस्न सक्दछ त ?
कुनै पनि मानवजातिसँग मानवताको लेसमात्र पनि इमानदारिता छ भने, नैतिक मूल्य र मान्यता छ भने आपूm विदेशीको बुटको प्रलाप सयौँ वर्ष भोगेर त्यो पीडा आफ्नो निरीह र निमुखा सँधियार मित्रलाई उपदेशात्मक मित्रताको पाठ सिकाउने, दुःख–कष्टमा सघाउने कि निचोरेर आन्द्राभुँडी निकाली समाप्त पार्ने, अनि उसको बाँच्ने अधिकार नै समाप्त पार्ने ? त्यसो गर्न पटकैपिच्छे नाकाबन्दी लाउने ! यो मानवजातिले गर्नै नहुने अपराध हो कि होइन ? कुनै पनि साँध–सँधियारले आपूm बलियो भएर कमजोर अर्को सँधियारको साँध चेपेको र उठीवास लगाएको इतिहास सायद नपाइएला ! पृथ्वीमा जसरी दुई सयभन्दा बढ्ता राष्ट्रहरु छन्, त्यसैगरी एउटै राष्ट्रभित्र जिल्लाहरु हुन्छन्, गाउँहरु हुन्छन् । प्रत्येक व्यक्तिको आआफ्नो जग्गाजमिन हुन्छन् । ती जमिनहरु आआप्mना अलग्गै हुन्छन् । ती सबै आआफ्ना अलग्गै जमिनमा साँध जोडिएका हुन्छन् ।
नेपालको छिमेकी भारतजस्तै हुन्थ्यो भने कबोलबमोजिमको तिर्नुपर्ने राशि भारतले जस्तै कबोल गरेको नदीनालाको मुआब्जा वा रकमको हिसाब नतिरे तिरिसकेँ भनेर बेइमानी गर्ने, जबर्जस्ती आफ्नो बताउने हो भने यो धर्तीका कमजोर मान्छेहरुले बाँच्ने कसरी ? यो पङ्क्तिकारले वर्षौंदेखि भन्दै र लेख्दै आएको कुरा ‘नेपाललाई प्रकृतिले नै दिएको जसरी तराईका फाँटहरु छन्, उसैलाई चाहिने गरी नदीहरु पनि दिएको हो । तराईका फाँटमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली सबै नदीहरु भारतको वरिपरि सिंचाइ र विद्युत् उत्पादन गरेर नेपाली जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक खान, लाउन र हाँसीखुसी बाँच्न पाउनका लागि मिलाएर लिएको प्राकृतिक सम्पत्तिमा आँखा आँखा भित्री र बाहिर नदेख्ने महामानवहरुले अन्धोले हात्ती छामेझैँ छाम्नसम्म नभ्याएर हतारिँदै सुम्पिदा कम से कम तिनको मूल्य तोक्नुपर्ने, अवधि तोक्नुपर्ने, नवीकरण हुनुपर्नेलगायत खोइ यी कुरा नेपालीले थाहा पाएका ? यस्ता कुरा थाहा पाउन र यसको जानकारी लिन कुनै नेपाली छोराछोरीको खाँचो प¥यो भन्दै थिएँ ।
कुनै सज्जनको घैँटोमा घाम लागेछ र कोशी, गण्डकी र महाकाली नदीहरुको केही कुरा उजागर गरेका छन् र भनेका छन्– नेपालको भूमिमा उत्पत्ति भएको पानी, नदीहरुनजिकका जनता २०६५ सालमा कहाँ बाढीपीडित भए । आजसम्म फाइदा खाने भारतले राहत दिएकै छैन भनी त्यहाँका जनता भन्दैछन्, तर भारतले चाहिँ दिनुपर्ने राहत ‘दिइ सकियो भन्छ अरे, कतिसम्म अपराध ! अझै कोशीलाई तीन सय मिटर अग्लो बाँध बाँध्ने, धनकुटा, उदयपुर, संखुवासभासमेत नौ जिल्ला डुबानमा पार्ने, १४ अर्ब घनमिटरको ताल बनाएर आकासे पुल बनाई कोसीको पानीलाई भारत पु¥याउने योजना छ । यो फुट्दा पूर्वी तराई समाप्त हुने यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् कांग्रेस–एमालेले । डुबानमा पारिने पूर्वका जनताले ढुंगामुढा गरेर मात्र यो काम रोकिएको छ । यस्तो अनौठो, आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम गर्ने हाम्रा बहादुर नेताहरु छन्, जसले जनतालाई यस्तो जनघाती कुरा बताउँदैनन् । जनता आफैँले बुझेर यस्ता राष्ट्रघात र जनघातबाट बच्न नसके देश भारतकै सती जानुको विकल्प छैन ।
यस्तै सन्दर्भमा गण्डक नदीको र महाकाली नदीसम्बन्धी पनि कुरा उल्लेख छ । २०७५ पुस ३० गतेको कुरा हो । नेपाल सरकारले भारतसँग औपचारिक बैठक नै बसी भएको वार्तासम्बन्धी कुरा हो । ‘भारतद्वारा पानी र क्षतिपूर्ति दिन इन्कार’ भन्ने शीर्षक नै छ । विडम्बना के छ भने नेपालको नदीनालाको पानी भारतद्वारा दिन इन्कार भन्ने भनाइ नै यौटा प्रलाप हो । महामानव भन्ने शब्दले मानवभन्दा उपल्लो वस्तु भन्ने जनाउँछ । उपल्लोले तल्लो स्तरकोलाई देख्न, जान्न नै नभ्याउने मेलोमेसो नपर्ने भएकाले आफ्नो वरिपरिको जिल्लै र त्यसमा बसोवास गर्ने कसैलाई नदेखी लाखाँैलाख जनता सुख्खाग्रस्तपारिका परचक्रीलाई आफ्नो प्राकृतिक स्रोत नै चेलीलाई वैवाहिक बन्धनमा पारी दाइजो सुम्पिएजस्तैे भारतलाई नेपाल सुम्पिए र त्यसबाट पाउने राहत सबै उसैको पोल्टामा प¥यो । यस्तो पनि हुन्छ मान्छेसँगको सम्बन्ध ? छिमेकीसँगको सम्बन्ध ?
यो जलस्रोतसम्बन्धी बैठकको विज्ञप्तिमा नेपालले अलापेको कुरा के छ भने गण्डक सम्झौताले नेपाललाई १५ मेगावाट दिने सर्तनामा छ । १५ को ठाउँमा ३ मेगावाटसम्म उपलब्ध हुन्थ्यो, तर पनि दिनुपर्ने कबोलबमोजिम पानी दिँदैन । बिजुली आउने त एउटा कहावत हो । बर्खामा बाढीले सताएको बेला त्यो पानी नेपालतिर पठाउँछ । अघिपछि नेपालको निम्ति कबुल गरेको पानी सिंचाइमा होस् वा विद्युत्मा, पानीको कुलोमा कमिला हिँडेको वीरगन्ज जाने सबैले देख्छन् । किनभने, नारायणी सिंचाइ भनेर पर्सा जिल्लातिरको हो सिंचाई गर्ने खेत । यी कुरा पनि बैठकको छलफलमा निस्केको कुरा र भारतले दिएको जवाफमा सबै उल्लेख छ । गण्डक नहरबाट नेपाली जनताले भोगेका कष्ट, नहरबाट भएको क्षति बनाइदिनुपर्ने वास्ता नगरेको र जवाफै यस्तै दिएको कुरा उल्लेख छ । यसबाट के कुरा बुझिन्छ भने नेपालको पानी नदीनालामा आफ्नो हक भइसकेको छ र नेपालले कुनै गुनासो गर्ने ठाउँ छैन भन्ने स्पष्ट झल्को भारतले दिएको छ ।
अपर कर्णालीको कुरा थाहै छ । उसले अपर कर्णाली बेच्ने प्रयास गर्दैछ । अपर कर्णाली संसारकै उदाहरणीय नदी हो, थोरै लगानीमा धेरै उत्पादन हुने । यो परियोजना नेपाली धेरैले आफैँ गर्न मागे । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीले दिएनन् । नेपालीको आँखामा पट्टी बाँधेर ‘ऊर्जा व्यापार’ को धाक गरेर जीएमआर भन्ने भारतीय कम्पनीलाई बुझाइयो । जनतालाई ढाँटेर कमिसनको पोको पारे पनि देश बनोस् भन्ने एउटै मात्र नेताको जन्म यहाँ भइदिएको भए नेपाल पनि संसारको कुनै राष्ट्रभन्दा कम हुने थिएन । जसरी ऊर्जा व्यापार भनी जनताको आँखामा पट्टी बाँधे पनि ५० वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन नगर्दा ५० वर्षको हर्जनासहित जीएमआरबाट त्यो सम्झौता फिर्ता हुनुपर्ने परम्परा यहाँका कमिसनखोरहरुले बसाउन सक्नु फाइदा नभए पनि हानि हुन्नथ्यो । यहाँ त कमिसनमा नदी बेच्ने, त्यो सन्धि कहिल्यै क्यान्सिल नहुने, त्यो नदी र पानीमा नेपालले कुनै हकभोग गर्न नपाउने प्रवृति हुँदै गयो । यो प्रवृत्ति खास गरेर कांग्रेसले बसाल्यो, किनभने इतिहासमा नदीनालाको पजनी कांग्रेसबाट मात्र भएको छ ।
एउटा अरूण तेस्रोचाहिँ कांग्रेसकै द्रोह गरेर केपी ओलीले ‘नाकाबन्दीमा लम्पसार नपर है केपी, हामी अलिनो खान सक्छौँ तर भारतको दादागिरी सहन चाहन्नौँ’ भनेर केपी मोदीकहाँ लम्पसार नपरेबापत् केपीको मनले नरेन्द्र मोदी रिसाएको जस्तो लागेर अरूण तेस्रोले मोदीलाई खुसाएका हुन् । अन्यथा, नेपालको पानी पजनी अरुबाट भएको रेकर्ड छैन । के गर्ने, देशमा आपूmले केकति लाभ पु¥याए ! मौकामा त्यस्ता कुरामा ध्यान नजाने, चुनाव हार्दा यस्तो भएन र उस्तो भएन, अब गर्नुपर्छ, जनताले बुझ्छन्, बुझाउनुपर्छ, हाम्रो पालो आउँछ भन्दै उखरमाउलो गर्छन् । एक वर्षको गतिले अबको चार वर्ष पनि केही हुन्छ जस्तो छेउछन्द देखिन्न । आजको कांग्रेसको गतिमा नेकपा नपुग्ला भन्न सकिन्न ।
२०७५ पुस ३० को बैठकको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले महाकाली सम्झौताको पनि विश्लेषण गरेको छ । भारतले अध्ययन गरेको छैन भन्ने, आलटाल गर्ने, टनकपुरबाट पाउनुपर्ने पानीलाई नदिने, उसले त गिरिजाले ४८ सालदेखि टनकपुरबाट अवैधरुपमा प्रयोग गर्दै आएको बिजुली र सिंचाइलाई वैध गरिदियो । यो विवाद लामो छ । किनभने, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सन्धि गरेर पनि नगरेको बताएपछि मुद्दा प¥यो, गिरिजाले हारे । अनि सन्धि भएको सदर भयो । भारतको लक्ष्मणपुर बाँधजस्ता बाँधैबाँधले नेपाल डुब्छ । त्यो डुबानबाट बचाउन त्यहाँ आउने नदी र खोलाहरुमा बाँध बाँध्ने भारतले कबोल गर्छ, तर काम गर्दैन । यिनै कुराहरुमा महाकाली २३ वर्षे सम्झौताको पनि छलफल भएको कुरा उल्लेख छ । यसपालिको छलफलमा कोशी उच्च बाँधको कुरा भारतले दोहो¥याइरहेको कुरा उल्लेख छ, किनभने नेपाल नै समाप्त भए पनि भारतलाई आफ्नो काम पूर्ति गर्नुछ, तर पूर्वका जनता आफ्नो बस्ती नै बग्ने कारणले कोशी उच्च बाँध सफल हुन नदिने पक्षमा छन् । अन्तिम निचोडमा के प्रस्ट छ भने नेपालको पानी र नदीनाला भारतबाट छुटाएर आफ्नो तजबिजले यसको मूल्य निर्धारण गर्ने एउटा उपाय हो– सम्पूर्ण नेपाली जनता उठेर यी बाँधहरु ध्वस्त पार्नुपर्छ ।
अर्को उपाय हो– राज्यभरि हस्ताक्षर अभियान चलाएर आधाभन्दा बढी जनताको मत लिएर संघीय अदालतमा उजुर गरेर फैसला लिनुपर्छ । किनभने, यो देशको सरकारमा बस्नेहरुमा नै भारतीय फौज नेपाल बसे पनि रमिते बन्ने वा आत्मसमर्पण गर्नेभन्दा अर्को विकल्प उनीहरुसँग छैन । तसर्थ, नेपाली जनजनमा चेतना भया !
६ महिनामा १६२ एचआईभी पोजेटिभ